Kuyini PVC ifilimu futhi kanjani it imakwe
Okufakiwe izinto ziye zaba enye yezindawo izinhlobo ezinkulu imikhiqizo sokudliwa embonini ekhulwini XX. Sinezizathu ezizwakalayo ukucabanga ukuthi ukubaluleka kwabo kuleli khulu leminyaka kuzokhulisa kuphela. Indawo ekhethekile phakathi lezi zinto kuthatha PVC ifilimu (PVC).
Okufakiwe kumelwe imisebenzi eminingana. Ukuvikelwa uMkhiqizo ezinonya amathonya zangaphandle, ukungcola kanye umonakalo ngesikhathi ezokuthutha futhi inqubo yokuthengisa - Its main injongo. Futhi ezinye zezici ezibalulekile ukuthonya nezisusa umthengi, njenge-ukubukeka ekhangayo nokwethembela yokuthi ngaphambilini isihloko wakhethwa akekho esetshenziswa noma kuye ngisho wathinta. PVC ifilimu eqhathanisa kahle ne best plastic izakhiwo optical futhi kungenzeka ngokusebenzisa i okudla okuthengwa eziningi.
PVC kunomthelela ukusabalala inkimbinkimbi eyisihlobo ubuchwepheshe. A luyimbudumbudu wendaba (polymer) kufakwa le extruder lapho ancibilike. Khona-ke kushaywa kusuka bubble enkulu, esebenza umthombo ungqimba okuqhubekayo, usike ebubanzini oyifunayo bese isilonda bobbins.
PVC ifilimu obusetshenziswa embonini ukudla ukuhweba, ngezincwadi ezimbili izinhlobo elula futhi ukushisa shrinkable. Ngamunye wabo kunenjongo lalo.
Yelula - PVC film sisonge inzuzo yayo yokuthengiselana ngaphandle kokudala weld. It libhekene a anezakhi ezikhethekile mechanical, ezifana ikhono owengeziwe futhi interlayer adhesion ngenxa ukwakheka insimu electrostatic futhi Luhambo aphakathi. It is kabanzi yizinhlangano ukuhweba ukudala izimo zenhlanzeko ngesikhatsi isitoreji nokudayiswa kwezimpahla.
PVC oluhlehlela ifilimu libhekene ikhono wehlise Ubukhulu yejeyomethri bedle ukushisa. Ukuze ukupakisha izimpahla kulo, kufanele enze imisebenzi emibili eyisisekelo: solder esifundeni kanye isihlalo. It ikhiqizwa ngesimo nengxenye-emikhonweni (ngamanye amazwi, eligoqiwe nengxenye ububanzi) noma imikhono, coiled e imiqulu. Uphawu sokuqhuba weldres zezimboni, kaningi, emincane, futhi wenza ehlezi, ngokuvamile evuthayo komoya.
Kuye uhlobo ezimpahla okwakumelwe zikhokhelwe phama, kusukela uhla olutholakala emakethe, umsebenzisi ukhetha usayizi oyifunayo. Izici ifilimu shrinkable ngokuvamile ecacile wokugubha. Ngokwesibonelo, ikhodi libhalwe ilebula PVCT 400 * 750 * 15 kusho ukuthi roll isigamu-emikhonweni kokuba ububanzi 40 cm, ubude 750 m, kanye ukushuba we ungqimba 15 microns.
Abakhiqizi PVC ngempela zibonisa mass. Ngokomlando, ukuthi PVC ifilimu zidayiswa ngesisindo.
Kukhona lolu hlobo izinto emaphaketheni kanye nokuntuleka - ku oluhlehlela ifilimu ungakwazi ukuphrinta umbhalo noma izithombe, njengoba Ikhona yini imibhalo ngeke uhlanekezelwe lapho kushintshwa Ubukhulu weJiyomethri. Nokho, surface bushelelezi kulula unamathele yimuphi ilebula noma, kungenjalo, buyela iphansi lalo. Ngokukhetha le ndlela ukubhaliswa kwe-trade, kufanele sikhumbule ukuthi ifilimu Nciphisa kudala isendlalelo zangaphandle optically esobala zivikela imihuzuko, uthuli, ukungcola, futhi unikeze noma imuphi, ngisho ibhokisi egqwalile kukhanye ecwebezelayo.
Ukumaka PVC elula ifilimu mayelana efanayo ukushisa-shrinkable, umehluko itholakala lokuthi ukuthi ukulimaza e isendlalelo esisodwa, ngakho-ke bathambekele Roll obuphelele kabili.
Amandla Ucingo: incazelo, izimiso yokusebenza, imibono kanye nokubuyekeza
Izifundo makeup: indlela ukudweba imicibisholo amehlo
Bangaki iziqephu ochungechungeni "Avenida Brasil" futhi bangaki zonyaka?
Dislocation we clavicle: Izimbangela, Izimpawu, Sifo Nokuselapha
Kakhulu umfundi sifo ngo-abadala nezingane. Indlela ukuqeda enhle kakhulu umfundi syndrome?